Xavi Oo Go'aansaday Inuu Ka Horumariyo Barcelona Dhanka Daafaca'
HomeWararka CiyaarahaXavi oo go’aansaday inuu ka horumariyo Barcelona dhanka daafaca’
Xavi oo go’aansaday inuu ka horumariyo Barcelona dhanka daafaca’
November 16, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi ayaa lagu soo waramayaa inuu u arko hagaajinta qaab ciyaareedka daafaca ee kooxda inay tahay mudnaanta marxaladaha hore ee booskiisa.
Kooxda reer Catalan ayaa laga dhaliyay 15 gool 12-kii kulan ee ay ciyaartay La Liga xilli ciyaareedkan, halka ay lix gool u dirtay labadii guuldaro ee Champions League ee ay kala kulmeen Bayern Munich iyo Benfica bishii September.
Xavi ayaa haatan isku diyaarinaya kulankiisii ​​ugu horeeyay ee uu hogaamiyo kooxda Barcelona waana kulanka Catalan derby ee ay sabtida la ciyaari doonaan kooxda Espanyol.
Kooxda ka dhisan La Liga ayaa weli lala xiriirinayaa dhowr ciyaartoy oo cusub, iyadoo kooxda la filayo inay firfircoonaato suuqa Janaayo inkastoo ay haysato dhibaatooyin dhaqaale.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Marca , mudnaanta ugu weyn ee Xavi xilligan waa inuu ka caawiyo kooxda inay dib u soo ceshadaan difaaceeda adag.
Blaugrana ayaa shabaqeeda ilaashatay labo kulan oo qura horyaalka La Liga xilli ciyaareedka 2021-22.